कुकुरले कसरी आफ्नो पुच्छर हल्लाउने गर्छ ? | Ratopati
कुकुरले कसरी आफ्नो पुच्छर हल्लाउने गर्छ ?
personरातोपाटी exploreकाठमाडौं access_timeचैत २७, २०७५ chat_bubble_outline0
सबै खाले कुकुरको पुच्छर हुन्छ । कुनै कुकुरको पुच्छर लामो हुन्छ त कसैको छोटो हुन्छ । तर हामीले याद गरेका छौ‌ भने कुुकुरले स“धै आफ्नो पुच्छर हल्लाइरहेको हुन्छ ।
विशेष गरेर खुसी भएको बेला यसले आफ्नो पुच्छर मज्जाले हल्लाउने गर्छ ।
आकारमा फरक भए पनि सबै कुकुरको पुच्छर एकै प्रकारले बनेको हुन्छ । तिनीहरुको पुच्छर स–साना हाडहरु जोडिएर बनेका हुन्छन् । ती हाडहरु एउटा माला जस्तै गरी जोडिएका हुन्छन् । जसले गर्दा थोरै माशंपेशीको मद्दतले पनि तिनीहरुले त्यसलाई आफूले चाहे अनुसार जुनै पनि दिशामा हल्लाउन सक्छन् ।
पुच्छर हल्लाउँदा तिनीहरुको निकै कम माशंपेशी प्रयोग हुने हुँदा तिनीहरु निकै कम थाक्ने गर्छन् । जसले गर्दा तिनीहरु प्रायः सधैं पुच्छर हल्लाउने गर्छन् ।